Akụkọ - Ọdịiche dị n'etiti nzacha elu na nzacha miri emi
A na -ejikarị ihe ihuenyo eme ihe maka nzacha elu yana a na -eji ihe maka nzacha miri emi. Ndịiche dị ka ndị a:
1. Ihe ihuenyo (nylon monofilament, monofilament metal) na -egbochi adịghị ọcha na nzacha n'elu ihe ahụ. Uru dị na ya bụ na enwere ike ihicha usoro monofilament ugboro ugboro yana ọnụ ahịa oriri dị ala; Mana ọghọm ya bụ ọnọdụ nzacha elu, nke dị mfe ịkpata mkpọchi akpa akpa nzacha. Ụdị ngwaahịa a kacha dabara maka oge nzacha siri ike na nkenke dị ala, na nkenke nzacha bụ 25-1200 μ m。
2. Ihe nwere mmetụta (akwa nhicha agịga, ihe mkpuchi na-afụghị akwa) bụ ihe nzacha miri emi nke nwere akụkụ atọ, nke a na-eji usoro eriri rụrụ arụ na oke porosity, nke na-abawanye ikike adịghị ọcha. Ụdị ihe eriri a bụ nke ọnọdụ nnabata ngwakọ, ya bụ, a na -egbochi irighiri ihe ndị buru ibu n'elu eriri ahụ, ebe anụ ahụ dị mma na -amaba n'ime akwa nke ihe nzacha, yabụ na nzacha nwere nzacha dị elu. arụmọrụ, Tụkwasị na nke ahụ, ọgwụgwọ okpomọkụ dị elu dị elu, ya bụ, itinye teknụzụ na-agbaze ngwa ngwa, nwere ike gbochie eriri ahụ ka ọ ghara ịla n'iyi n'ihi oke mmetụta nke mmiri n'oge nzacha; The chere ihe bụ disposable na nzacha ziri ezi bụ 1-200 μ m。
Isi ihe onwunwe nke nzacha mmetụta bụ dị ka ndị a:
Polyester-eriri nzacha a na-ejikarị, ezigbo nguzogide kemịkal, arụ ọrụ na-erughị 170-190 ℃
A na -eji polypropylene maka nzacha mmiri mmiri na ụlọ ọrụ kemịkalụ. Ọ nwere ezigbo nguzogide acid na alkali. Ọnọdụ okpomọkụ ya na-arụ ọrụ erughị 100-110 ℃
Ajị anụ - ezigbo ihe mgbaze mgbochi, mana ọ baghị uru maka mgbochi acid, nzacha alkali
Nilong nwere nguzogide kemịkalụ dị mma (ewezuga nguzogide acid), yana okpomọkụ ọrụ ya erughị 170-190 ℃
Fluoride nwere ọrụ kachasị mma nke nguzogide okpomoku na nguzogide kemịkal, yana okpomọkụ ọrụ na-erughị 250-270 ℃
Tụnyere uru na ọghọm dị n'etiti ihe nzacha elu na ihe nzacha miri emi
Enwere ọtụtụ ụdị ihe nzacha maka nzacha. Dị ka eriri waya a kpara akpa, akwụkwọ nzacha, mpempe akwụkwọ igwe, ihe nzacha sintered na mmetụta, wdg Agbanyeghị, dị ka ụzọ nzacha ya si dị, enwere ike kewaa ya n'ụdị abụọ, ya bụ ụdị elu na ụdị omimi.
1. Ihe nzacha dị n'elu
N'elu ụdị nyo ihe na -akpọ zuru nyo ihe. N'elu ya nwere ụfọdụ jiometrị, micropores edo edo ma ọ bụ ọwa. A na -eji ya ejide unyi dị na mmanụ na -egbochi ya. Ihe nzacha na -abụkarị larịị ma ọ bụ twill filter nke ejiri eriri igwe, eriri akwa ma ọ bụ ihe ndị ọzọ. Ụkpụrụ nzacha ya yiri iji ihuenyo nkenke. Izi ezi nzacha ya na -adabere n'ogo geometric nke micropores na ọwa.
Uru nke ihe nzacha ụdị elu: ngosipụta nkenke, ngwa dị iche iche. Ọ dị mfe ihicha, reusable, ogologo ọrụ ndụ.
Ọdịmma nke ihe nzacha ụdị elu dị ka ndị a: obere mmetọ; N'ihi mmachi nke teknụzụ nrụpụta, nkenke ahụ erughị 10um
2. Ihe nzacha miri emi
Omimi ụdị nyo ihe na -akpọ miri ụdị nyo ihe ma ọ bụ esịtidem ụdị nyo ihe. Ihe nzacha nwere oke ọkpụrụkpụ, nke enwere ike ịghọta dị ka ntinye nke ọtụtụ ihe nzacha ụdị elu. Ọwa dị n'ime ahụ enweghị nke oge ọ bụla na enweghị oke nke oghere miri emi. Mgbe mmanụ gafere site na ihe nzacha, a na -ejide unyi dị na mmanụ ma ọ bụ tinye ya na omimi dị iche iche nke ihe nzacha ahụ. Ka m wee rụọ ọrụ nzacha. Akwụkwọ nzacha bụ ihe eji enyocha miri emi nke ejiri na sistemụ hydraulic. Ihe ziri ezi dị n'etiti 3 na 20um.
Uru nke ihe nzacha ụdị miri emi: nnukwu unyi, ndụ ogologo ọrụ, nwee ike wepu ọtụtụ irighiri ihe pere mpe karịa nkenke na warara, nkenke nzacha dị elu.
Ọghọm nke ihe omimi ụdị ihe omimi: enweghị nha nha nha oghere oghere ihe. Enweghi ike ịchịkwa oke nke adịghị ọcha; Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe na -agaghị ekwe omume ihicha. Ọtụtụ n'ime ha bụ ihe a na -atụfu atụfu. Oriri dị ukwuu.